Zoom App Download for Jio Ucingo [Ukulanda Okusheshayo] | I-RoidHub
Blog Business Ikhasinkomba
»Sondeza uhlelo lokusebenza lwe-Jio Phone [Ukulanda okuzenzekelayo]
Zoom Lokusebenza Kokulanda kwe-Jio Ucingo [Ukulanda Ngokushesha]
4.7 / 5 ( 34 amavoti )
Qiniseka noma cha. Ukuthi ubhubhane noma ukungabikho kwakho. Ukushaywa kwevidiyo sekuyinto yesidingo. Ngakho-ke uma ungumsebenzisi weJio Ucingo, lapha sizochaza indlela yokulandwa kweZoom App yeJio Ucingo.
Ekuvukeni kwalo bhubhane, sidlula ezikhathini ezingakaze zibonwe ngaphambili. Impilo isiphendukele phansi. Inkululeko yokuhamba nokuhamba kangangokuba sayithatha njengento elula.
Ezimweni ezinjalo, akunakwenzeka ukuba uhlale kude nomsebenzi, uvalwe ekhoneni legumbi wesaba ukusabalala kwegciwane.
Yingakho amabhizinisi namahhovisi eza nezinye izindlela zokwenza imisebenzi yazo iqhubeke ngokushelela ngangokunokwenzeka. Kulesi simo, ukusetshenziswa kwezinkomfa nezicelo zevidiyo sekuyindlela ejwayelekile kakhulu yokusebenza, imihlangano nezingxoxo.
Uma usebenzisa i-Jio Ucingo eNdiya. Ungase ukuthole kulula ukuxhuma kozakwethu noma abanye obathandayo ngezinhlelo zokusakazwa kwevidiyo njengeZoom App. Sizokunikeza inqubo nemithombo ukuze uyithole.
Sondeza uhlelo lokusebenza Lokulanda iJio Ucingo: Ungayenza kanjani?
Izici Zoom App
Ungalanda kanjani i-Zoom App yeJio Ucingo
Ungayenza kanjani i-Zoom App APK Ukulanda kweJio Ucingo
Zoom App for the mobiles and PCs. Ungalanda futhi ufake lolu hlelo lokusebenza kufoni yakho yeJio. Ukuyisebenzisa ungajoyina imihlangano nababambiqhaza kuze kufike kubantu abayikhulu.
Ngesixuku esinjalo ungabona ukucaca okucacile, okuphezulu, ukuhlangana kobuso, futhi uhlanganyele kukho. Ngesikhathi esifanayo nokwabelana ngesikrini sakho nokuxhumana ngemiyalezo engaphakathi nohlelo.
Uhlelo lokuthola umklomelo lwe-Zoom App kwifoni yeJio lungasetshenziselwa imihlangano eku-inthanethi, umhlangano wevidiyo, nemiyalezo yeqembu usebenzisa lolu hlelo lokusebenza olulodwa.
Igama Sondeza Umhlangano Wamafu
Igama lephakheji us.zoom
Lolu hlelo lokusebenza luhamba phambili phakathi kwazo zonke izinhlelo zokusebenza zohlobo lwalo. Ungajabulela izici ezilandelayo uma ukulanda i-Zoom App kwefoni yeJio sekuqediwe.
Ikhwalithi ephezulu yokwabelana ngesikrini
Yabelana ngesikrini ngqo kusuka kwi-Jio smartphone yakho.
Izithombe zokwabelana ngesikrini, amawebhusayithi, i-Google drive, amafayela webhokisi, nebhokisi lokudonsa, noma amanye amadokhumenti.
Thumela imibhalo eminingi, izithombe namafayela omsindo ngqo kusuka kufoni yakho ephathekayo yeJio ngompompi.
Khombisa isimo sokutholakala.
Ungamema oxhumana nabo befoni noma oxhumana nabo nge-imeyili.
Ungabamba iqhaza njengethameli noma njengesipikha esisebenzayo
Isebenza kukho konke ukuxhumana kwe-inthanethi kufaka phakathi i-3G / 4G noma i-WiFi.
Kufanele unikeze ukufundelwa kokulandela Sebenzisa i-athikili ephelele yabasebenzisi befoni be-JIO.
Ukulanda Umlilo Kakhulu ku-Jio Ucingo
Kunezindlela ezimbili zokulanda lolu hlelo. Eyodwa isuka ngokuqondile esitolo se-google play kanti enye ifayela le-APK elingafakwa kamuva kwiselula yeJio. Nakhu ukuthi ungayilanda kanjani kusuka ku-Google Playstore.
Iya esitolo seGoogle Play (Xhuma ekugcineni kwe-athikili)
Sesha uhlelo lokusebenza lokusondeza ngokusebenzisa ibha yokucinga engenhla kwekhasi.
Thepha noma chofoza kukhetho lokufaka
Lapho inqubo isiqedile, ungathola isithonjana sohlelo lokusebenza kusikrini sakho sefoni seJio. Vele uthephe ukuze uvule futhi uxhumeke khona lapho.
Lokhu kulula njengenqubo yokufaka okuqondile. Lapha kuzodingeka ukuthi uhambe ngezinyathelo ezimbalwa ezingeziwe futhi ufake uhlelo lokusebenza ngesandla. Sizochaza inqubo ngokulandelana. Kumele nje wenze ngokulandelana kwezinombolo ezikhonjiswayo.
Isinyathelo sokuqala ukulanda ifayela le-APK. Ukuze uthole lokho, kuzofanela uchofoze noma uthephe inkinobho ethi 'Landa i-APK' ngezansi.
Lokhu kuzoqala inqubo esikhathini sobude be-10 (kuya ngejubane lakho le-inthanethi).
Lapho inqubo isiqediwe, thola ifayela le-APK kulwazi lwakho lweselula bese uthinta kulo.
Lapha ungahle utshelwe ukuba unike amandla inketho yemithombo engaziwa. Ungakwenza lokho kusukela kuzilungiselelo zokuphepha.
Bese uthinta ezinye izikhathi ezimbalwa, futhi uzoba sekupheleni kwenqubo yokufaka.
Lokhu kuqeda inqubo yokufaka. Manje usungasebenzisa i-Zoom yamakholi wevidiyo nokuxhumana.
Ukulanda uhlelo lokusebenza lokusondeza ifoni yeJio kudinga izinyathelo ezilula okufanele zilandelwe. Ngemuva kwalokho ungajabulela zonke izici ezithi lolu hlelo olwesabekayo luqhosha. Ukuze uthole i-Zoom APK ukuze uthinte isixhumanisi esingezansi noma ungaya ngqo ku-Google Play Isitolo ngokuthepha kusixhumanisi sesibili.
Sondeza uhlelo lokusebenza
Zoom App Download yeJio Ucingo